How Parents Can Help Their Kids With Studying – Mandalay International Science Academy
ကလေးတှေ စာကွညျ့ရာ အထောကျကူပေးနိုငျတဲ့အခကျြလေးတှေ ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
ကိုယျတိုငျ ကလေးသုံးယောကျ ဖခငျတဈဦးဖွဈလို့ ဒီကိစ်စက ခကျခဲမှနျးသိပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ဘာသာရပျအကွောငျးအရာတှေ ကောငျးကောငျးမသိရငျ ခကျခဲလှပါတယျ။
ဘာသာရပျကို သိသိ၊ မသိသိ၊ ဘယျလို အကူအညီပေးလို့ရတယျဆိုတာကို အကွံပေးခငျြတာပါ။
စာကွညျ့ရာမှာ အလကေ့ငျြ့ကောငျးတှရေဖို့ဒီအကွေံပေးခကျြတှကေို အလေးထားကွဖို့ ကနြျောရဲ့ ကြောငျးသားတှကေို စာသငျနှဈအစကတညျးကအကွံပွုပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခငျဗြားတို့ရဲ့ ကလေးတှအေတှကျလညျး အထောကျကူဖွဈစမေယျလို့ယုံကွညျ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
ပွနျအကဲဖွတျဖို့လိုပွီ ဆိုတဲ့ အခြိနျကို သိပါစေ။ ကနြျောရဲ့ စိတျပညာတနျးမှာ ကြောငျးသားတှကေို တကျတကျကွှကွှ ပါဝငျသငျယူစခေငျြတယျ။ ပွောခငျြတာက စာသငျခြိနျမှာပါဝငျဆှေးနှေးတာ၊မေးခှနျးမေးတာတှလေုပျစခေငျြတယျ။ အတနျးထဲမှာ သငျယူတာတှကေို သူတို့ရဲ့ တကယျ့ပွငျပလောကမှာအသုံးခနြိုငျတာ ဖွဈစခေငျြတယျ။ အိမျမှာ စာကွညျ့တဲ့အခါလညျး ဒီသဘောမြိုးပဲဖွဈစခေငျြတယျ။စိတျလေးနတောကိုဖယျပွီး လလေ့ာထားတာတှကေို မှတျမိနစေဖေို့ပါ။ လူကွီးတှေ မှတျမိနဖေို့မဟုတျဘူး။ကိုယျ့ကလေးထကျ ကိုယျက ပိုပွီး လုပျနရေတယျဆိုရငျတော့ ဒါက ပွနျပွီး အကဲဖွတျဖို့၊ညှိယူဖို့ လိုပွီဆိုတဲ့ အခြိနျပါပဲ။
ပွနျပွနျဖတျတယျဆိုတာ အမွဲ အလုပျဖွဈတဲ့အရာတော့ မဟုတျဘူး။ မှတျစုတှေ ပွနျကွညျ့တာ အကြိုးရှိနိုငျပါတယျ။ ဒီစာတဈပုဒျကိုပဲ ထပျပွနျတလဲလဲ ဖတျနရေပွီဆိုရငျတော့ဖွငျ့ အခြိနျတှကေို ဒီထကျပိုကောငျးအောငျ အသုံးခဖြို့ လိုပါလိမျ့မယျ။ ဖတျနတေဲ့အကွောငျးအရာ ကို သဘောပေါကျဖို့ စာတဈပုဒျကို ဘယျနှဈကွိမျလောကျမြား ဖတျနခေဲ့ပွီးပွီလဲ? တယျလီဖုံးလို၊ဒါမှမဟုတျ တခွား အာရုံပကျြစမေဲ့အရာတှေ အနားဝနျးကငျြမှာရှိနရေငျ ကလေးရဲ့ အာရုံစိုကျနိုငျစှမျးမှာ အခုလိုမြိုးကွုံတှနေို့ငျပါတယျ။
အာရုံလှငျ့စရာ နဲလလေေ၊ကောငျးလေ။။ ဒီမူနဲ့ညီအောငျ ဆုသေးသေးလေးတှလေညျးခဖြို့လုပျပါ။ အာရုံမလှငျ့ဘဲစာကွညျ့နိုငျရငျ နားဖို့အခြိနျတိုလေးတှထေားပေးတာမြိုးပေါ့။ ဉာဏျနဲ့ယှဉျပွောရရငျတော့ဘယျသူမှ အလုပျစုံကို တပွိုငျ တညျးထိထိရောကျရောကျမလုပျနိုငျဘူးဆိုတာကိုတော့မှတျထားစခေငျြပါတယျ။
ကိုယျ့စိတျကွိုကျသီခငျြးလေးနားထောငျရငျး ဇာတျလမျးလေးကွညျ့ရငျး၊ဝငျလာတဲ့ မကျဆလေ့ေးပွနျဖွရေငျး စာကို အာရုံစိုကျလုပျနိုငျဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
ဒီအတှကျ ဘယျလို ကူညီပေးနိုငျမလဲ?
ကလေးစာကွညျ့ရာမှာ အကူညီပေးနိုငျတဲ့ နညျးလမျး (၃) သှယျ။
စာနဲ့ပတျသကျတဲ့ ဉာဏျစမျးလေးတှမေေးပါ။သဲလှနျစကို နဲနိုငျသမြှနဲနဲ ပဲ ပေးပါ။ ဒီလိုလုပျတာက ကလေး-ဘာကိုသိလို့၊ဘာကိုတော့မသိဘူးဆိုတာ ပိုသတိပွုမိလာစနေိုငျပါတယျ။မှားနတေဲ့ အသိတှကေိုဖယျရငျး အမှနျကို ခနျ့မှနျးတတျလာမယျ။ ခနျ့မှနျးတယျဆိုတာ မကောငျးတဲ့အရာ မဟုတျပါဘူး။မှားနတေဲ့အသိကလေးဆီမှာဖှံ့ဖွိုးလာမှာကို မိဘအနနေဲ့လကျခံလိုမှာလညျးမဟုတျပါဘူး။အဖွတေဈခုကိုဦးတညျတဲ့ ကွောငျးကြိုးပွမေးခှနျးမေးပါ။နောကျတဈခုမကူးခငျ ကလေးကို အဖွမှေနျအား ထပျပွနျတလဲဖွဆေိုပါစေ။
ကလေးကို သူလလေ့ာနတေဲ့ စာတှရေဲ့ အယူအဆသဘောတရား
(concepts) တှကေိုခရြေးခိုငျးပါ။သူနားလညျးသလို ရှငျးပွခိုငျးပါ။ရှငျးပွတဲ့အခါ မှတျစုကို သိပျအားမကိုးပါစနေဲ့။တဈနရောရာမှာထဈနေ၊တနျ့နရေငျ ၊ ကိုယျက အရိပျအမွှကျဖျောပေးတာတောငျမရဘူးဆိုရငျသသေခြောခြာမရသေးဘူးဆိုတာသခြောတယျ။ဘယျနားမှာ ခကျနေ၊ရှုပျနသေလဲဆိုတာသိရအောငျ ကလေးကို အေးအေးဆေးဆေးမေးကွညျ့ပါ။တခါတရံမှာ သူတို့အတှကျ အဟနျ့အတားဖွဈနတေဲ့အရာတှကေို ဆှေးနှေးဖျောထုတျလိုကျရငျ အဲ့ဒီနရောကို ကြျောလှားပွီး ရှဆေ့ကျလို့ရသှားတတျပါတယျ။
ဒီနညျးနဲ့မအောငျမွငျရငျ သူတို့လလေ့ာနတေဲ့စာနဲ့ပတျသကျလို့ သူတို့သိတယျထငျသမြှကို ခရြေးခိုငျးပါ။
(ကနြျော)ကမြကတော့ ဒီနညျးကို ဦးနှောကျထဲကစုပုံထုတျခွငျး brain dump လို့သုံးတယျ။အတနျးကနေ ထှကျမသှား ခငျ ကြောငျးသားတှကေို ဒီလိုခရြေးခိုငျးတယျ။အိမျမှာလညျး လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို တတျနိုငျသမြှ မှတျမိအောငျလုပျခိုငျးပါတယျ။
(၃) အခှငျ့သငျ့တိုငျး မှတျဉာဏျစဈဖို့ မေးခှနျးမေးပါ။
မှတျမိခွငျးကိုစဈတဲ့ ကှကျလပျဖွညျ့ခွငျး၊ တူရာယှဉျတှဲခွငျး၊ မှားမှနျရောထှေးအမှနျရှေးခွငျး စတဲ့ မေးခှနျးသုံးမြိုးကိုမေးပါ။ကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ အဖွမှေနျကို မှတျမိပွီး မှတျဥာဏျဝေါဟာရဘဏျကနေ အမှနျကိုရှေးထုတျဖွရေတဲ့ မေးခှနျးမြိုးတှပေေါ့။ ကိုယျ့မှာ ဒီလို မေးခှနျးမြိုးတှေ ရနိုငျရငျ ကလေးတှရေဲ့ပုံနှိပျစာအုပျတှထေဲက မေးခှနျးတှကေို ရှောငျလိုကျပါ။ ဘယျလိုအရိပျအမွှကျမှ မသိရတော့ မေးခှနျးတှကေ ပိုပွီး စိနျချေါမှုရှိလာတာပေါ့။မှတျဉာဏျနဲ့ဆိုငျတဲ့ မေးခှနျးတှကေို ပွနျမေးတဲ့နညျးကတော့ အဖွမှေနျပေးမထားမိဖို့ပါပဲ။
ကလေးက ဘာဖွလေို့ဘာပွောရမှနျးမသိဖွဈနရေငျ မေးခှနျးရဲ့အဖွနေဲ့ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးအရာကို
မှတျမိသလို ပွနျရှငျးပွခိုငျးပါ။တခွားအရေးပါတဲ့ အသေးစိတျတှကေို မှတျမိပွီး အဖွနေားမှာ ဝဲလညျနတောမြိုးလညျးရှိတတျပါတယျ။
အခြိနျ မလောကျဘူးလား? အလုပျမြားလှနျးတဲ့မိဘတှကေို ကိုယျခငျြးစာပါတယျ။ ကလေးတှကေို အကူညီမပေးနိုငျတဲ့အခါမြိုးမှာ အာရုံပကျြစမေဲ့ အရာတှကေို အနားမှာမထားဖို့ ကလေးကို သတိ
ပေးပါ။ ကိုယျတိုငျဉာဏျစမျးမေးခှနျးလေးတှလေုပျခိုငျးပါ။စာကွညျ့ခြိနျကွာရငျ ခဏတဖွုတျ နားခြိနျထားဖို့ လိုတယျဆိုတာကိုသတိပေးပါ။
ကနြျောတို့ ဆရာ မိဘ ကြောငျးသားတှကေ ဒီအကွံပွုခကျြတှကေို ကငျြ့သုံးနိုငျလေ၊ ကြောငျးသားတှေ အတှကျ ထိရောကျ အကြိုးရှိတဲ့ စာကွညျ့အလကေ့ငျြ့ကောငျးရလပေါပဲ။စာကွညျ့ အလကေ့ငျြ့ကောငျးဆိုတာက စာပိုလလေ့ာနိုငျတာ၊ အမှတျကောငျးတာ၊ပိုပွီး အကြိုးရှိအောငျလုပျနိုငျတာ၊ ပိုပြျောရှငျမှုရတာ၊ သငျယူမှုအတှကျ ပိုပွီး စိတျပါဝငျစား တကျကွှလာတာကိုဆိုလိုခွငျးဖွဈပါတယျ။
(မူရငျးဆောငျးပါး https://www.edutopia.org/article/how-parents-can-help-their-kids-studying အား ဘာသာပွနျပါသညျ။)
ကလေးတွေ စာကြည့်ရာ အထောက်ကူပေးနိုင်တဲ့အချက်လေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် ကလေးသုံးယောက် ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်လို့ ဒီကိစ္စက ခက်ခဲမှန်းသိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဘာသာရပ်အကြောင်းအရာတွေ ကောင်းကောင်းမသိရင် ခက်ခဲလှပါတယ်။
ဘာသာရပ်ကို သိသိ၊ မသိသိ၊ ဘယ်လို အကူအညီပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကို အကြံပေးချင်တာပါ။
စာကြည့်ရာမှာ အလေ့ကျင့်ကောင်းတွေရဖို့ဒီအကြေံပေးချက်တွေကို အလေးထားကြဖို့ ကျနော်ရဲ့ ကျောင်းသားတွေကို စာသင်နှစ်အစကတည်းကအကြံပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကလေးတွေအတွက်လည်း အထောက်ကူဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည် မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပြန်အကဲဖြတ်ဖို့လိုပြီ ဆိုတဲ့ အချိန်ကို သိပါစေ။ ကျနော်ရဲ့ စိတ်ပညာတန်းမှာ ကျောင်းသားတွေကို တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်သင်ယူစေချင်တယ်။ ပြောချင်တာက စာသင်ချိန်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးတာ၊မေးခွန်းမေးတာတွေလုပ်စေချင်တယ်။ အတန်းထဲမှာ သင်ယူတာတွေကို သူတို့ရဲ့ တကယ့်ပြင်ပလောကမှာအသုံးချနိုင်တာ ဖြစ်စေချင်တယ်။ အိမ်မှာ စာကြည့်တဲ့အခါလည်း ဒီသဘောမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်။စိတ်လေးနေတာကိုဖယ်ပြီး လေ့လာထားတာတွေကို မှတ်မိနေစေဖို့ပါ။ လူကြီးတွေ မှတ်မိနေဖို့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကလေးထက် ကိုယ်က ပိုပြီး လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါက ပြန်ပြီး အကဲဖြတ်ဖို့၊ညှိယူဖို့ လိုပြီဆိုတဲ့ အချိန်ပါပဲ။
ပြန်ပြန်ဖတ်တယ်ဆိုတာ အမြဲ အလုပ်ဖြစ်တဲ့အရာတော့ မဟုတ်ဘူး။ မှတ်စုတွေ ပြန်ကြည့်တာ အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာတစ်ပုဒ်ကိုပဲ ထပ်ပြန်တလဲလဲ ဖတ်နေရပြီဆိုရင်တော့ဖြင့် အချိန်တွေကို ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် အသုံးချဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဖတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာ ကို သဘောပေါက်ဖို့ စာတစ်ပုဒ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်များ ဖတ်နေခဲ့ပြီးပြီလဲ? တယ်လီဖုံးလို၊ဒါမှမဟုတ် တခြား အာရုံပျက်စေမဲ့အရာတွေ အနားဝန်းကျင်မှာရှိနေရင် ကလေးရဲ့ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းမှာ အခုလိုမျိုးကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။
အာရုံလွင့်စရာ နဲလေလေ၊ကောင်းလေ။။ ဒီမူနဲ့ညီအောင် ဆုသေးသေးလေးတွေလည်းချဖို့လုပ်ပါ။ အာရုံမလွင့်ဘဲစာကြည့်နိုင်ရင် နားဖို့အချိန်တိုလေးတွေထားပေးတာမျိုးပေါ့။ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြောရရင်တော့ဘယ်သူမှ အလုပ်စုံကို တပြိုင် တည်းထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သီချင်းလေးနားထောင်ရင်း ဇာတ်လမ်းလေးကြည့်ရင်း၊ဝင်လာတဲ့ မက်ဆေ့လေးပြန်ဖြေရင်း စာကို အာရုံစိုက်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒီအတွက် ဘယ်လို ကူညီပေးနိုင်မလဲ?
ကလေးစာကြည့်ရာမှာ အကူညီပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း (၃) သွယ်။
စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဉာဏ်စမ်းလေးတွေမေးပါ။သဲလွန်စကို နဲနိုင်သမျှနဲနဲ ပဲ ပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်တာက ကလေး-ဘာကိုသိလို့၊ဘာကိုတော့မသိဘူးဆိုတာ ပိုသတိပြုမိလာစေနိုင်ပါတယ်။မှားနေတဲ့ အသိတွေကိုဖယ်ရင်း အမှန်ကို ခန့်မှန်းတတ်လာမယ်။ ခန့်မှန်းတယ်ဆိုတာ မကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။မှားနေတဲ့အသိကလေးဆီမှာဖွံ့ဖြိုးလာမှာကို မိဘအနေနဲ့လက်ခံလိုမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဖြေတစ်ခုကိုဦးတည်တဲ့ ကြောင်းကျိုးပြမေးခွန်းမေးပါ။နောက်တစ်ခုမကူးခင် ကလေးကို အဖြေမှန်အား ထပ်ပြန်တလဲဖြေဆိုပါစေ။
ကလေးကို သူလေ့လာနေတဲ့ စာတွေရဲ့ အယူအဆသဘောတရား
(concepts) တွေကိုချရေးခိုင်းပါ။သူနားလည်းသလို ရှင်းပြခိုင်းပါ။ရှင်းပြတဲ့အခါ မှတ်စုကို သိပ်အားမကိုးပါစေနဲ့။တစ်နေရာရာမှာထစ်နေ၊တန့်နေရင် ၊ ကိုယ်က အရိပ်အမြွက်ဖော်ပေးတာတောင်မရဘူးဆိုရင်သေသေချာချာမရသေးဘူးဆိုတာသေချာတယ်။ဘယ်နားမှာ ခက်နေ၊ရှုပ်နေသလဲဆိုတာသိရအောင် ကလေးကို အေးအေးဆေးဆေးမေးကြည့်ပါ။တခါတရံမှာ သူတို့အတွက် အဟန့်အတားဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်လိုက်ရင် အဲ့ဒီနေရာကို ကျော်လွှားပြီး ရှေ့ဆက်လို့ရသွားတတ်ပါတယ်။
ဒီနည်းနဲ့မအောင်မြင်ရင် သူတို့လေ့လာနေတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်လို့ သူတို့သိတယ်ထင်သမျှကို ချရေးခိုင်းပါ။
(ကျနော်)ကျမကတော့ ဒီနည်းကို ဦးနှောက်ထဲကစုပုံထုတ်ခြင်း brain dump လို့သုံးတယ်။အတန်းကနေ ထွက်မသွား ခင် ကျောင်းသားတွေကို ဒီလိုချရေးခိုင်းတယ်။အိမ်မှာလည်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တတ်နိုင်သမျှ မှတ်မိအောင်လုပ်ခိုင်းပါတယ်။
(၃) အခွင့်သင့်တိုင်း မှတ်ဉာဏ်စစ်ဖို့ မေးခွန်းမေးပါ။
မှတ်မိခြင်းကိုစစ်တဲ့ ကွက်လပ်ဖြည့်ခြင်း၊ တူရာယှဉ်တွဲခြင်း၊ မှားမှန်ရောထွေးအမှန်ရွေးခြင်း စတဲ့ မေးခွန်းသုံးမျိုးကိုမေးပါ။ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ အဖြေမှန်ကို မှတ်မိပြီး မှတ်ဥာဏ်ဝေါဟာရဘဏ်ကနေ အမှန်ကိုရွေးထုတ်ဖြေရတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေပေါ့။ ကိုယ့်မှာ ဒီလို မေးခွန်းမျိုးတွေ ရနိုင်ရင် ကလေးတွေရဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်တွေထဲက မေးခွန်းတွေကို ရှောင်လိုက်ပါ။ ဘယ်လိုအရိပ်အမြွက်မှ မသိရတော့ မေးခွန်းတွေက ပိုပြီး စိန်ခေါ်မှုရှိလာတာပေါ့။မှတ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ပြန်မေးတဲ့နည်းကတော့ အဖြေမှန်ပေးမထားမိဖို့ပါပဲ။
ကလေးက ဘာဖြေလို့ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေရင် မေးခွန်းရဲ့အဖြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို
မှတ်မိသလို ပြန်ရှင်းပြခိုင်းပါ။တခြားအရေးပါတဲ့ အသေးစိတ်တွေကို မှတ်မိပြီး အဖြေနားမှာ ဝဲလည်နေတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။
အချိန် မလောက်ဘူးလား? အလုပ်များလွန်းတဲ့မိဘတွေကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ကလေးတွေကို အကူညီမပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အာရုံပျက်စေမဲ့ အရာတွေကို အနားမှာမထားဖို့ ကလေးကို သတိ
ပေးပါ။ ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းလေးတွေလုပ်ခိုင်းပါ။စာကြည့်ချိန်ကြာရင် ခဏတဖြုတ် နားချိန်ထားဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးပါ။
ကျနော်တို့ ဆရာ မိဘ ကျောင်းသားတွေက ဒီအကြံပြုချက်တွေကို ကျင့်သုံးနိုင်လေ၊ ကျောင်းသားတွေ အတွက် ထိရောက် အကျိုးရှိတဲ့ စာကြည့်အလေ့ကျင့်ကောင်းရလေပါပဲ။စာကြည့် အလေ့ကျင့်ကောင်းဆိုတာက စာပိုလေ့လာနိုင်တာ၊ အမှတ်ကောင်းတာ၊ပိုပြီး အကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်တာ၊ ပိုပျော်ရွှင်မှုရတာ၊ သင်ယူမှုအတွက် ပိုပြီး စိတ်ပါဝင်စား တက်ကြွလာတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(မူရင်းဆောင်းပါး https://www.edutopia.org/article/how-parents-can-help-their-kids-studying အား ဘာသာပြန်ပါသည်။)